शिवम् सिमेन्टका एचआर मेनेजरले, 'तँ मु*हरुलाई गोली ठोकेर मार्छु' भन्दै धम्क्याएपछी... !
ARCHIVE, INVESTIGATION » शिवम् सिमेन्टका एचआर मेनेजरले, 'तँ मु*हरुलाई गोली ठोकेर मार्छु' भन्दै धम्क्याएपछी... !
हेटौंडा - जनता ठगेर बदनाम भएको सिमेन्ट उद्योग सिमेन्टका कर्मचारीको रबैयाले सीमा नाघ्न थालेपछी स्थानीयहरु प्रतिकारमा उत्रिन थालेका छन् । यसैबीच हेटौंडाको हटियामा रहेको शिवम् सिमेन्टका नयाँ एचआर म्यानेजर संजय सुवेदीले रक्सी पिएर स्थानीयलाई अपशब्द बोल्दै थर्काएपछी शिवम् सिमेन्टका कर्मचारीको रबैया विरुद्ध त्यहाँका स्थानीयहरु बोल्न थालेका छन् ।
'तँ मु*हरुलाई गोली ठोकेर मार्छु भन्दै शिवम् सिमेन्टका कर्मचारीहरुले स्थानीयहरुलाई दुर्व्यवहार गरे । अझ महिलाहरुमाथिसमेत अश्लील गाली गर्ने काम भयो । अति नै भएपछी प्रहरीमा उजुरी गर्यौं ।' एक स्थानीयले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने । स्थानीयको उजुरीपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
'रक्सीको नसामा गाउलेलाई जथाभावी बोल्ने सुवेदीलाई उद्योगबाट हटाउनु पर्छ । उनलाई कारवाही नभएसम्म हामी छोड्दैनौं । यसै पनि शिवम् सिमेन्टका कर्मचारीहरुको रबैया बढी नै छ । यहाँ उद्योगले गलत काम गर्दा पनि पैसा र पावरका भरमा छुट हुने गरेको छ । स्थानीय पत्रिकाले सिमेन्टको गलत कुराको पर्दाफास गर्दा काठमाडौँबाटै मार्केटिङ मान्छे आएर केहि पत्रकार किन्ने काम समेत भएको छ । हामी सबै मिलेर शिवम् को रबैया विरुद्ध लाग्नुपर्छ ।' एक स्थानीयले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने ।
यता प्रहरीले भने मापसे गरी गाउलेलाई धम्काउने सुबेदीलाई कारवाही गर्न सकेको छैन । स्थानीय केहि प्रहरीलाई नै सिमेन्ट उद्योगले बेला बेलामा पैसा दिने गरेकाले यस्तो आनाकानी गरेको स्थानीयहरुको आरोप छ । यता प्रहरीले भने स्थानीयले लिखित रुपमा उजुरी नदिए सम्म र मेडिकलले मापसेको रिपोर्ट नदिए सम्म कारवाही गर्न नमिल्ने बताएको छ ।
यसो त यो शिवम् सिमेन्टमा गलत कर्पोरेट कल्चरको पहिलो उदाहरण भने होइन । यसअघि शिवम् सिमेन्टको मार्केटिङ विभागमा काम गर्ने एक कर्मचारीको पनि समाचार हटाउने विषयलाई लिएर यस्तै लफडा भएको खबर बाहिर आएको थियो ।
शिवम् सिमेन्टको कर्पोरेट कल्चर : रक्सी पिएर स्थानीयलाई गोली ठोक्ने धम्की दिने एचआर मेनेजेर प्रहरी नियन्त्रणमा !
शिवम् सिमेन्टलाई 'सेटिङ'मै उन्मुक्ति, 'जनतामारा' ठग सिमेन्टलाई नापतौल विभागले कार्वाही नगर्ने !
इजाजत नवीकरण गर्न कमिसन, गरेपछि ठगी ! यस्तो रहेछ शिवम् सिमेन्टका ठगीका घटना बढ्नुको कारण !
खुलेआम् जनता ठग्ने 'शिवम् सिमेन्ट'लाई कानुन लाग्दैन, 'सेटिङ'मै रोकिन्छ कारवाही !
शिवम् सिमेन्टको कर्तुत: '५० किलोको बोरामा ४२ किलो सिमेन्ट बेच्ने, अनि २० बोरामा १ बोरा सित्तैमा भन्दै हौवा पिट्ने'
'देशमारा' शिवम् सिमेन्टको ठगी गर्ने अर्को 'आइडिया', नयाँ 'स्किम' पछाडी कर छल्ने यस्तो 'बदनियत' !
शिवम् सिमेन्ट : झूट बोल्ने मामलामापनि 'नो कम्प्रमाइज' !
शिवम् सिमेन्ट, 'बिजुली चोरी'को मामलामापनि 'नो कम्प्रमाइज'!
शिवम् सिमेन्ट : 'ठगी गर्ने' मामलामापनि 'नो कम्प्रमाइज'!
शिवम् सिमेन्टको नयाँ शैली, ब्रान्डीङको मामलामा पनि 'नो कम्प्रमाइज'